September | 2017 | | Myanmar Tech Press
2017-09-29 2018-04-06 Admin Ecommerce, Internet
Image Source: https://www.facebook.com/mmfreelancehub/ သင်ဟာ freelancer တစ်ယောက်လုပ်ပြီး online မှာငွေရှာလို့ရပြီဆိုတာသိပြီးပြီလား? သိတဲ့သူတွေရှိသလိုမသိသေးတဲ့သူတွေလည်းများမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီတော့ freelancer ဆိုတာဘာပါလဲ? Freelancer ဆိုတာကတော့အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်သူသဘောမျိုးပါဘဲ။သူက online မှာဆိုရင်တော့ project တစ်ခုလိုဟာမျိုးအတွက် ဥပမာ translate လုပ်ပေးတာ၊ ဆောင်းပါးတွေရေးပေးတာစတာတွေကိုလုပ်ကိုင်ရမှာပါ။အပြင်ကအလုပ်ဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းအလုပ်သမားအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲအချိန်ပိုင်းအနေနဲ့လုပ်ပေးရတာမျိုးပါ။ဥပမာအချိန်ပိုင်းဘာသာပြန်တာမျိုးတွေပေါ့။
2017-09-29 2018-04-06 Admin Ecommerce, Marketing, နည်းပညာ
Image Source: http://fdctech.com/syopb.html ယနေ့ခေတ် လူငယ်များ အနေဖြင့် အနာဂတ်တွင် ကမ္ဘာကြီးအားအကျိုးပြုနိုင်သော စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များအဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ business plan ပြိုင်ပွဲများကို ကျင်းပလာကြသည်။ ထို့နည်းတူ
2017-09-22 2018-04-06 Admin ၀န်ဆောင်မှု, Ecommerce, Marketing, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Image Source: https://dreamticketmm.com/ ခရီးဝေးBus ကုမ္ပဏီ JJ Express ရဲ့ Bus Booking App ကိုဟိုတစ်လောကမှ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာဘဲ တစ်ခြားခရီးဝေးBus Booking Service လည်း release ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အဲ့ဒါကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
2017-09-13 2018-02-13 Admin နည်းပညာ, သင်တန်း
၈လပိုင်း ၂၆ရက်နေ့တွင် Kanaung Hub Incubation Center မှာကျင်းပတဲ့ Uni Hack Challenge 2ကိုသွားကြည့်တယ်။ ကျောင်းသားများတင်ဆက်တဲ့ Hackathonမှာ ကျောင်းသား၆ယောက် ၁ဖွဲ့လုပ်ပြီးတော့ စုစုပေါင်း အဖွဲ့၂၀ က တင်ဆက်ပါတယ်။
Image Source: http://pokopokopoko.net အရင်အရင်နှစ်တွေတုန်းကတစ်နေရာနှင့်တစ်နေရာ ငွေလွဲ၊ ငွေပို့ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်မှအချိန်ကုန်သည့်ကိစ္စ။ ငွေလွဲစရာရှိ်ရင် အလုပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ရက်တစ်ရက်သတ်မှတ်ပြီး လုပ်ရသည့်အလုပ်။ အခုလိုလည်းဘဏ်တွေဘဏ်ခွဲတွေ မပေါများသေးတော့ကိုယ်နေတဲ့နေရာနဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်မည့်ဘဏ်ကိုသွား ကိုယ်နာမည်ခေါ်မည့်အချိန်ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့စောင့်ခဲ့ရတယ်။